एक आत्माघाती गोलको बदला मृत्यु | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७५ फाल्गुन ११ शनिबार, ०४:१८
२०७५ असार २ गते प्रकाशित, l २१:५३
काठमाडौं, २ असार । जारी विश्वकपमा मोरोक्कोले गरेको आत्मघाति गोलका कारण इरानले जितहासिल गेरपछि एउटा पुरानो घट्नालाई ताजा बनाईदिएको छ ।
घट्ना आजभन्दा २४ बर्ष पहिलेको हो, जब कोलम्बियाका फुटबल खेलाडी आन्द्रे एस्कोबारले १९९४ को विश्वकप खेलमा एक आत्मघाती गोलको मुल्यमा आफनो ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।
२२ जून १९९४ मा कोलम्बिया र अमेरिकाबीच भैरहेको महत्वपूर्ण खेलमा कोलम्बियाली फुटबल टिमले १–२ को हार सामना गर्नुपर्यो । यस खेलको क्रममा कोलम्बियाको तर्फबाट डिफेन्डर आन्द्रे एस्कोबारले एक आत्माघाती गोल गरेका थिए ।
हार ब्यहोरेको कोलक्बियाको टिम यो खेलसंगै विश्वकपबाट बाहिरिएको थियो । विश्वकपमा हार ब्यहोरेको कोलम्बिया घर फर्किएको ठिक दश दिनपछि यो घट्ना घट्न पुगेको थियो ।
सबन्धित समाचारहरु :
रोनाल्डोको घरमा खाना खान जाँदै हुनुहुन्छ ? दशचोटि सोच्नुहोस
किन गरियो ईरानी महिलालाई फुटबल हेर्न फुकुवा ?
ईरानि खेलाडीलाई किन बेचेन अमेरिकाले जुत्ता !
२ जूलाई १९९४ मा आन्द्रे एस्कोबार उनको शहर मेडिलिनमा एक पब बाहिर उभिएको समयमा उनीमाथि गोलि प्रहार भएको थियो । नाइट क्लबको बाहिर कार पाकिङ गर्ने ठाउँमा तीन जानाको समुहमा रहेको अज्ञात समुहले उनीमाथि अन्धाधुँन्द गोलिचलाउदा उनको मृत्यु भएको थियो ।
बिहान ३ बजेको समयमा भएको यस धटनामा उनको शरिरमा बाह्र राउन्ड गोलि प्रहार भएको थियो । जुन धटनालाई उनले गरेको आत्मधाति गोलको परिणामको रुपमा हेरिन्छ ।
एक रिपोटका अनुसार आन्द्रेमाथि गोली चलाउनुभन्दा पहिले हमलाकारीले ‘आत्मधाति गोलकोलागी धन्यबाद’ भन्दै गोलि चलाएका थिए । आक्रमणकारीले गोली चलाईरहँदा आन्द्रेले गोल गोल भन्दै कराएका थिए । घट्नालगतै आन्द्रेलाई अस्पताल लगिएपनि उनलाई बचाउन सकिएन । उनको शबयात्रामा करिब १२०,००० मालामीको सहभागीता थियो ।
२०७५ असार ९ गते सम्पादित l २३:४३
पत्रकार धमलाद्धारा माछापुच्छ्रे स्कुलको शैक्षिक प्रर्दशनीको उद्धघाट्न
तेस्रो संस्करणको ‘पिङ्काथन हाफ म्याराथन’ मा जे देखियो
दिपक बोहोरासहित २१ जना भोलि राप्रपामा प्रवेश गर्दै
ओली कमजोर भएपछि नेकपाको कार्यदल नै भंग
शाहरुखलाई दिन लागिएको मानार्थ डिग्री सरकारले रोकिदियो
जनतालाई पानी खोज्‍न जनप्रतिनिधि जंगल–जंगल
स्ववियु चुनाव वैशाखमा
सरकारी जग्गा हयात होटलका नाममा दर्ता
विषाक्त मदिरा सेवन गरेका कारण १५ महिला सहित २५ जनाको मृत्यु
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट आसेपासेमात्र लाभान्वित
नेपाली बस्ती डुबानमा पर्नेगरी सिमानामा बाँध बनाउँदै भारत
किन जनावरसंग शारिरिक सम्बन्ध बनाउन चाहान्छन् मान्छे?
बम बिस्फोटका घाईतेहरुको मेडिसिटीमा उपचार हुँदै (तस्विरसहित)